Ny fanavaozana farany ny Google Photos dia mahatonga azy hifanaraka amin'ny FotoScan | Vaovao IPhone
Miresaka momba ny fanavaozana vaovao ny fampiharana Google Photos indray izahay, iray amin'ireo mpampiasa be mpampiasa indrindra izay tsy maniry na tsy mankasitraka ny serivisy iCloud an'ny Apple. Google Photos dia mamela antsika hitahiry ny saripika rehetra alaintsika amin'ny iPhone sy ny horonan-tsary rehetra raha tsy mihoatra ny 4k vahaolana, maimaimpoana tanteraka izany. Fa manolotra antsika safidy maro be ihany koa hikarohantsika ireo sary izay efa notehirizinay, na amin'ny alàlan'ny toerana, amin'ny alàlan'ny fanekena zavatra, fanekena tarehy ... fa koa aorian'ity fanavaozana farany ity dia afaka mamantatra ny sary rehetra izay nohamarininay tamin'ny fampiharana PhotoScan, azo alaina ho an'ny iPhone ihany.
Ny application PhotoScan, izay efa hita tao amin'ny App Store nandritra ny volana vitsivitsy, dia mamela antsika scan tsy misy taratra ny sary ananantsika manodidina ny tranontsika. Izy io koa dia mamokatra ho azy ireo sary manafoana ny sisiny, mamela antsika hanao scan mahitsy sy mahitsizoro miaraka amin'ny fanitsiana ny fomba fijery sy ny fihodinan'ny manan-tsaina hitazonana ireo sary mahitsy na dia nanao ahoana aza ny fahitantsika azy.
Saingy tsy ny zava-baovao ihany no entin'ity fanavaozana ny laharana 2.7.0 an'ny Google Photos ity antsika, satria ho fanampin'izany dia nampiana fijery vaovao vaovao nohatsaraina koa mba hanasongadinana ireo sarinay nohatsaraina, fanaraha-maso ny diovina daty vaovao nohavaozina ka tsy mora kokoa mifindra isan-taona mankany amin'ny iray hafa. Performance, iray amin'ireo olana nananan'ny fampiharana hatrizay, nihatsara koa izy io. Ny Google Photos sy PhotoScan dia samy misy maimaim-poana alefa sy ampiasaina amin'ny alàlan'ny rohy amin'ny faran'ity lahatsoratra ity.
FotoScan avy amin'ny Google Photosmaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny fanavaozana farany ny Google Photos dia mahatonga azy hifanaraka amin'ny FotoScan
Fahasarotan'ny antoko fahatelo mahafinaritra dimy ho an'ny Apple Watch
Nisokatra indray ny fanenjehana an'i Apple amin'ny Samsung noho ny fakana tahaka ny famolavolana iPhone